Economics inotonga kuvhurazve rwendo kuenda kuDubai, Egypt, Lebanon, Qatar, Tunisia kunyangwe hosha iri?
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhau » Economics inotonga kuvhurazve rwendo kuenda kuDubai, Egypt, Lebanon, Qatar, Tunisia kunyangwe hosha iri?
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Egypt News • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Israel Nhau • Kuputsa Nhau dzeRebhanoni • Kuputsa Qatar Nhau • Kuvhuna Tunisia Nhau • Kuputsa UAE Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • nhau • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Seychelles Mubairo - Dubai_0
Nyika dzeArabhu, kunyanya idzo dzinovimba zvakanyanya nekushanya senge Dubai, Egypt, neRebhanoni, vari kutora nzira dzakasiyana pavanenge vachisunungura kuvhara kwavakaisa pamiganhu yavo uye nhandare kuti varwise COVID-19.
Dubai, inonyanya kugarwa nemanomwe emirates anoumba United Arab Emirates, yakavhurazve mikova yayo kune vashanyi muna Chikunguru 7. Kuvhurwa kwakauya kunyangwe danho reUAE rekudzivirira vagari varo kuti vafambe kuenda kunze kwenyika uye kurambidza vekunze kupinda zvakasununguka mumiganhu yayo.
Dubai iri kumba-base ku emirates, nendege huru kwazvo kuMiddle East, uye nyika yechina pakukura inotakura neakakwira vafambi-mamaira. Emirates yakaisa matanho akati wandei ehutano pamwe nekuchengetedza ekutanga patsva ndege dzakarongwa.
Kompimendi yehutsanana kits ichapihwa kune vese vafambi pavanopinda-muDubai International Airport uye nendege dzinoenda kuDubai. Iwo makiti ane masks, magurovhosi, antibacterial wipes, uye ruoko sanitizer.
Magurovhosi nemasiki izvo zvino zvinosungirwa kune vese vatengi nevashandi panhandare yendege muDubai, nepo masiki chete achirairwa kuEmirates ndege.
Pakusvika panhandare yendege, masikina anopisa munzvimbo dzakasiyana siyana anotarisa tembiricha yevafambi nevashandi. Mukuwedzera, zviratidzo zvekusimudza muviri zvakaiswa pasi uye munzvimbo dzekumirira kubatsira vafambi kuti vachengetedze chinhambwe chakakodzera pakutarisa, kupinda munyika, kukwira, uye kutamisa nzvimbo.
Mohammed Yasin, mukuru wezano wezano kuAl Dhabi Capital, akaudza The Media Line kuti paive nedzvinyiriro yekukurumidza kuvhurwa kwenzvimbo dzekushanya uye dzekugamuchira vaeni.
Izvi, anodaro, "zvichatungamira kutanga [kwekushanda] nehotera, nhandare yendege uye nzvimbo dzekutengesera, zvinova zvinhu zvakakosha zvikuru muhupfumi hweDubai."
Yasin anoti denda risati rasvika, nzvimbo dzekushanya nedzimwe dzakabatana dzaive ne "40%" yeGDP yeEmirate.
Anosimbirira kuti Dubai ine dambudziko rekonavirus riri pasi pesimba, chikamu chehutano chine kugona kurapa varwere.
“Zvipatara zvemumunda zvakavhurwa kuti zviwedzere kugona kwehurongwa hwezvehutano, uye huwandu hwevarwere pahwakatanga kudzikira, zvimwe zvezvipatara izvi zvakavharwa. Naizvozvo, zvakave zvakakosha kuti kuvhurezve chikamu chekushanya, ”anotsanangura kudaro.
Iyi sarudzo yaive nechokuita nekutsvaga mune chiyero pakati penjodzi uye mabhenefiti.
"Iye zvino huremu hwebatsiro hwakura kupfuura njodzi," anodaro.
Musi waChikunguru 1, Egypt yakavhurazve nhandare dzayo kekutanga kubva munaKurume. Kunyangwe hazvo June akaona zviitiko zvitsva uye kufa kupfuura mwedzi mina yapfuura zvakabatanidzwa, hurumende yakafunga kurega nzira dzakawanda dzakatorwa kutapura hutachiona kuitira kuchengetedza hupfumi.
EgyptAir yakazivisa kuti vafambi vanofanirwa kupfeka masaga nguva dzese, kutanga pavanopinda nhandare, nepo vese vashandi vachipfeka zvekuzvidzivirira (PPE), kusanganisira kumeso nhoo, uye kugara vachiongororwa tembiricha.
Tembiricha yevafambi ichaenzaniswawo. Pane zvipenga zvekunamira pasi kubatsira vafambi kuchengetedza daro rakachengeteka kubva kune mumwe.
EgyptAir nguva pfupi yadzo yakadzosa vanodarika zviuru zvishanu vekuEjipitori kubva kunze kwenyika, uye neHurumende Yezvekushanya yakavhurazve zvivakwa, pakati pavo maPiramidhi eGiza neMuseum yeEgypt iri muCairo.
Mohammed Farhat, muongorori weAl-Ahram Center for Strategic Study, akaudza The Media Line kuti danho rehurumende rakatariswa zvakanaka zvichitarisirwa nemitengo yekuvhara.
"Nyika zhinji dzechiArab nedzenyika dzepasi rose dzakaita sarudzo dzakadai nekuti hatigoni kuramba takavhara - imamiriro ezvinhu akasarudzika nekuda kwemamiriro ezvinhu," anodaro.
Sarudzo yeEjipitori chikamu chetsika yepasi rose yekuchengetedza hupfumi kuvhurika kuitira kuti vanhu varambe vachitsigira mhuri dzavo, anowedzera.
"Pasi rose [mari] inochengeterwa mamiriro akasarudzika ishoma," anodaro. "Nyika dzese dzakachengetedzwa kubhadhara mwedzi yemari nemari yemumba mumamiriro ezvinhu akasarudzika, asi idzi hadzigoni kupera nedambudziko rimwe chete."
Izvo zvakakosha kwazvo, anoenderera mberi, kuchengetedza matura epasirese kumatambudziko emangwana.
“Kunyangwe nyika dzine matura makuru hadzina kuzviisa panjodzi, sezvo tisingakwanise kupedza matura epasi rose nekuvharwa kumwe nekuda kwechirwere checoronavirus. Nyika dzinofanirwa kuve nenzvimbo dzekuchengetedza mamwe matambudziko ekukurumidzira, ”anodaro.
Beirut's Rafik Hariri International Airport yakavhurwazve nendege pa10% yemunhu musi waChikunguru 1, zvine matanho akasimba ekuchengetedza uye hutsanana panzvimbo.
Mafashama echisimba anosungirwa kune vafambi uye vanofurwa nemhepo mukati mechiteshi uye mundege. Vafambi vese vanofanirwa kuunza huwandu hwakakwana hwemasiki nekuvachinja maawa mana ega ega. Vanofanirawo kuuya nemaoko avo sanitizer.
Jassem Ajaka, purofesa wezvehupfumi paLebanese University, anonzwa danho rekuvhura nhandare rakakosha kwete nekuti richabatsira chikamu chekushanya, asi nekuti mari yekunze yakawanda inopinda munyika.
“Huwandu hukuru hwevanhu vane hutachiwana hweCOVID-19 vanopinda muLebanon kuburikidza nendege. Naizvozvo, kuchengetedza nhandare kuvharwa chingave chinhu chakachengeteka, asi kana paine kurasikirwa kwezuva nezuva kweanosvika mamirioni makumi matatu emadhora pazuva [mune mari yezvekushanya], pane dambudziko rakakura, ”akadaro The Media Line.
Lebanon yanga ichirwara nedambudziko rekushaikwa kwemari pamadhora, zvinova zvimwe zvezvikonzero zvekuratidzira kuri kuitika mumigwagwa munyika. Isati yavhurwa, nhandare yendege yakanga yakavhurika kune vanoenda kunze kwenyika vaiuya nemadhora aidiwa kutsigira pondo reLebanese nekubhadhara zvekudya kunze kwenyika.
"Lebanon haichakwanise kuenda isina mari yekunze," anodaro. "Kunyangwe hazvo kuwedzera kwechirwere checoronavirus, mari yacho yakakosha munyika."
MuJorodhani, hurumende yakazivisa svondo rino kuti nyika ichatanga kuvhurazve miganhu yayo uye nhandare kune vafambi vekunze muna Nyamavhuvhu mushure mekuvharwa kwemwedzi mina.
Mukuyedza kudzikisira njodzi, pachave nerunyorwa rwenyika dzakabvumidzwa. Pamusoro pezvo, vafambi vanouya vanofanirwa kupasa bvunzo yekoronavirus kwemaawa makumi manomwe nemaviri vasati vaenda uye voita bvunzo yechipiri pavanosvika.
Humambo hunotorwa senzvimbo yakachengeteka, zvichipiwa budiriro yehurumende mukudzora kupararira kweutachiona.
Mazen Irshaid, nyanzvi yezvemari inotungamirwa neAmman anonyorera nhepfenyuro dzinoverengeka dzechiArab, anoti kushanya kwakakosha sezvo kwaive chikamu chegumi muzana cheyakagadzirwa neJoridhani pasati pasvika denda iri.
"Kana chikamu chezvekushanya chikavandudzwa, zvichafungisisa nezvezvimwe zvikamu zvisina kubatana nazvo, sekutakura, kugamuchira vaenzi, kupa zvekudya uye mamwe mapato anopa mari," akaudza The Media Line.
Anotaura kuti vanopfuura mamirioni evashanyi vakashanyira Jordani gore rapfuura.
"Zvichibva pane zvataurwa nevakuru, kuvhurwa kwacho kuchaitika zvishoma nezvishoma uye kubva kune dzimwe nyika dzine njodzi, uye zvichienderana nemitemo yakatemwa nehurumende," anodaro Irshaid.
Chikamu chekushanya chakange chaona kukura kwakakura mumakore achangopfuura, kunyanya mushure mekunge kugadzikana kwehukama kwaitwa muSriya neIraq, akadaro.
"Chirwere checoronavirus chakatidzosera kunzvimbo yekutanga," anowedzera. "Haina kungokanganisa kushanya chete uye nezvimwe zvine chekuita nazvo, asiwo hupfumi hwese."
Prof. Yaniv Poria, sachigaro weDhipatimendi reHotera neKushanya Management paBen-Gurion University yeNegev muIsrael. Iyo Media Line kuti makambani mazhinji ekufambisa mudunhu anga ave nezvinetso zvikuru nemari inonyudza uye nekudaro achamanikidzwa kukwidza mitengo zvakanyanya.
"Unofanirwa kufunga kuti makambani ekufambisa haanyatsoita mari nekutengesa matikiti chete, asi nekutengesa mapakeji ezororo uye mahotera sechikamu chechibvumirano," akadaro. "Ndine chokwadi chekuti kana coronavirus yapera, mitengo yacho ichave yakatokwira kwazvo."
Makambani ekufambisa anofanirwa kutanga kufunga kunze kwebhokisi kuti awane nzira dzekugara mubhizinesi, anodaro Poria.
“Pamwe vanofanira kuronga kuti vatakuri uye vafambi vafambe mundege imwe chete. Kazhinji tine ndege dzekutakura uye ndege dzevatakuri. Pamwe tinoda kupa zvikamu zvemutoro nezvimwe zvikamu zvendege imwechete kune vanofamba, ”akadaro.
"Vanofanirwa kuve nehunyanzvi kuitira kuti iite inobatsira," akawedzera.
Poria anoti ndege dzendege dzinofanirwa kunamatira kune zviyero nemaitiro ekuchengetedza mhando yebasa.
"Kare, kufamba kwaive chiitiko uye chiitiko chakatarirwa nevanhu nekutarisira," akatsanangura. “Zvino zvichave zvishoma uye zvishoma saizvozvo. Basa racho harizove rakafanana. Vapfuuri vachange vachikahadzika kwete chete nezve mhando yebasa, asi nezvekuti ndege ichave yakachena sei, uye nezvevamwe vafambi. ”
Inishuwarenzi ichave chimwe chinhu chikuru pakusarudza kubhururuka uye nendege ipi, Poria anoti, kunyanya sezvo nendege dzakawanda dzichiregwa mazuva ano, uye vatengi vazhinji vari kunetseka kudzoserwa mari yavo.
"Makambani akasimba mune zvemari uye anokwanisa… kubhadhara vatakuri kana ndege ikamiswa makambani achabudirira," akadaro. "Kuenderera mberi, nyaya yeinishuwarenzi yendege uye muripo ichaita basa rakakura."
Chivimbo chichavawo chakakosha kune ramangwana rekushanya, sezvo vanhu vachatanga kusarudza nendege zvichibva nekuti vanofunga kuti zvinotevera nzira dzekuchengetedza.
"Vazhinji vachasarudza kubhururuka chete nendege dzavanofunga kuti dzinoomesera mukuona hutano uye kuchengetedzeka kwevashandi pamwe nevatakurwi," akadaro.
Panogona zvakare kuve nezviitiko zvekuti nendege dzinomuka chete kana paine huwandu hwakakwana hwevatakuri.
"Kare, vanhu vazhinji vakaita sarudzo yekufamba zuva kana maviri zvisati zvaitika, asi izvi hazvichazove zvakadaro," akadaro Poria.
"Vanhu vanofanirwa kuronga kare kare uye hazvizove nyore," akaenderera mberi. “Zvichava zvakaoma zvikuru. Vanhu vanofanirwa kupa zvitupa kuti havana hutachiona. Vachafanirwa kuzadza mafomu akawanda vasati vafamba, saka haizove sarudzo iri nyore. ”
Vamwe vafambi, iye anotenda, vachabhururuka chete pavanenge vachifanira kudaro.
“Zoom inotibvumira kuti tiite zvinhu zvatakange tisingafungi kuti taigona kare. Kunyangwe mune vadzidzi, kana uchikwanisa kuita musangano kuburikidza neZoom, tinoibata kuburikidza neZoom pane kufamba, ”akadaro. "Shamwari nehama dziri kuenda kumichato, kushanya kana kumwe kutandara hazvizove chinhu kupfuura zvaiitika kare."
Qatar ayakaziviswa musi waChikunguru 21 kuti kutanga Nyamavhuvhu 1, vagari uye vagari vechigarire vaizobvumidzwa kufamba kunze kwenyika uye kudzoka pese pavanoda.
Vanosvika kubva ku40 "nyika dzine njodzi" vachatofanira kuyedzwa COVID-19 bvunzo pavanosvika kunhandare uye vanyore kuzvipira kune vega kwevhiki.
Mushure memazuva manomwe, vachazoedzwa kechipiri. Kana zvisina kunaka, vanogona kubuda voga; kana zvakanaka, vanozoendeswa kunzvimbo yehurumende kuti vazviparadzanise.
Vafambi vanouya kubva kunyika dzisiri pane dzakachengeteka rondedzero vanofanirwa kuwana "hutachiona-husina chitupa" kubva kunzvimbo inozivikanwa yeECVID-19 yekuyedza kwete anopfuura maawa makumi mana nemasere vasati vatiza uye vanoteerera mutemo wekupatsanurwa mushure mekuuya.
Pakati paJune, iyo World Tourism Sangano Wapikisa Tunisiya nzvimbo yekushanya yakachengeteka, uye musi waJune 27, nyika yekuchamhembe kweAfrica yakavhurazve miganhu yayo kuvashanyi.
Israel Airports Authority yakazivisa musi waChikunguru 20 kuti vashanyi vekunze, kusara vashoma, vacharambidzwa kupinda munyika kusvika munaGunyana 1. Kune mishumo yekuti nyika icharamba ichirambidza kupinda kune vekunze kusvika Mbudzi.
by DIMA ABUMARIA, Iyo MediaLine